This bonus will be active between 2nd-4th, 9fung-11th, 16fung-rechi18, 23Rd-wa25 June uye 30th June – 2nd it July. (BST)
BST is the equivalent of ACST -9.30hrs, -1hr INO, PTZ + 8til
Free spins and Bonuses can take up to 3 kushanda mazuva kubva kumagumo kukwidziridzwa kuti dzinonzi kuchikwama chenyu.
The kunonyanyisa kutendeutsa mari kubva bhonasi mari chichange dzavhara pana 4X inouya mari paakavapa. Bonus funds convert automatically to cash once wagering is complete
Kamwe zvikanzi bhonasi yenyu inoramba yemu- 28 mazuva. Bonus spins remain valid for 7 mazuva. Unofanira kupedza wagering zvinodiwa iyi, dzasara bhonasi mari vachabviswa nhoroondo yako.
Bhonasi Credits vakasununguka uye asingakwanisi kushandiswa anotevera mitambo: Dracula, Guns ‘N’ Roses, Jimi Hendrix, Divine Fortune, The Invisible Man, Cleopatra MegaJackpot, Siberian Storm Megajackpot, Megajackpots Isle O'Plenty, Wolf Run Megajackpot, Star Lanterns Megajackpot, Gong Xi Fa cai, More Monkeys akatisiyira Jackpot, Genie Jackpots, Winstar, Justice League, Batman, Superman, The Flash, Green Lantern, An Evening pamwe Holly Madison, Psycho, James Dean, The Nguruve Wizard, Thunderstruck II, Avalon, Wheel of Fortune on Tour, Champion Raceways, Slot O Gold, Super Chakabva, Super Diamond Deluxe